I-Beats Solo 3 i-Wireless kunye nePilisi + go (PRODUCT) RED | IPhone iindaba
Masiqale indlu ngeziseko, ke masichaze ukuba yintoni (IMVELISO) BOMVU xa ungekayazi. USteve Jobs, kwiminyaka eyadlulayo, waqala iphulo lokuxhasa uphando kunye nonyango lwe-AIDS, ngale ndlela, iApple ngamanye amaxesha isungula izixhobo ngombala obomvu, owaziwa njenge (IMVELISO) BOMVU, oya kuthi ufumane ipesenti yentengiso yabo kule misebenzi yesisa. Kulungile Ikhathalogu yezi mveliso iye yandiswa kwakhona, ngeli xesha ngee-headphones ezingenazingcingo ze-Beats Solo 3 Kwaye ngeBeats Pill + isithethi esiphathwayo, ukuba ubuzikhangela zibomvu ngokupheleleyo, sele unazo.
Ii-headphone kunye nesithethi ziyaqhubeka nokugcina amaxabiso afanayo, sisiseko se (RED PRODUCT), ngaphandle kwezinye izinto ezithengisiweyo okanye ezithengiswe kwifandesi ekhethekileyo yeemveliso ezithile ngombala obomvu, njengoko kusenziwa ngemini yayo nge IMacPro. I-Beats Solo 3 ii-headphone ezingenazingcingo zibiza i- € 299,95 eSpain, ngelixa isithethi seBeats Pill + sisazobiza i-229,95. Nangona kunjalo, ngekhe ube nakho ukubabamba okwangoku, ke buyisela ikhadi lakho letyala epokothweni.
Kwiwebhusayithi ye-Apple baboniswa njenge "Kuza ngokukhawuleza" Ezi zixhobo, sikwisibini seeVenkile zeApple kwaye azifumaneki nazo.
Ukuba ungathenga itekhnoloji kwaye uxhase ezi ntlobo zemibutho, yeyiphi indlela ebhetele yokwenza ngaphandle kokuthenga ii-headphone kuhlobo lwakho oluthandayo. Kunyaka ophelileyo iApple inyuse malunga ne-100 yezigidi zeedola kwiimveliso zayo ezibomvu, uphawu olucacileyo lokuba isicwangciso sisasebenza kwiminyaka kamva. Kwelinye icala, inkampani ikwathathe ithuba lokukubonisaInguqulelo ye-urBeats kunye neSolo 3 ngombala abathi bawubiza ngokuba yi-Ultra Violet, ekhethekileyo kwiVenkile yeApple kunye nokubetha kakhulu, ngexabiso elifanayo.
Thenga iBeats Solo 3
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Beats Solo 3 Wireless and Pill + go (PRODUCT) RED
Ii-AirPods zinokuthengisa kwiveki ezayo